Banyere Anyị - Dongmeng Machinery emeputa na china
About Dongmeng Machinery Machinery
Shanghai DongMeng Road & Bridge Machinery Co., Ltd bụ a nnukwu emeputa nke azụmahịa na-ekpuchi ngwá R & nkwupụta ụda; D, n'ichepụta, ndinuak ngwá n'ire, akọrọ ájá ngwá n'ichepụta na gburugburu ebe obibi-echebe ngwá n'ichepụta. Anyị factory emi odude ke Fengxian District, Shanghai, China. Anyị nwere ikike nke mbubata na mbupụ azụmahịa nri, na anyị na-na-na-na asambodo nke ISO9001: 2000 na nweta dị ka Aaa ama edenyere, wdg Anyị factory bụghị naanị manufactures ot agha crushers, mmetụta crushers, jijiji meziri, kamakwa nwere ike Nlụpụta mba mbụ na klas akụrụngwa dị ka Euro-style n'agba crushers / euro-style mmetụta crushers / compound cone crushers / haịdrọlik cone crushers / ọhụrụ TVSI usoro ájá igwe na na.
Banyere technology R & nkwupụta ụda; D, anyị ụlọ ọrụ ahụ nke ọma mepụtara mba kasị elu akụrụngwa usoro dị ka ike akọrọ ájá Ndinam usoro, gburugburu ebe obibi-echebe ha na ájá nkewa usoro, nke na-edozi usoro nke nsogbu na ahịa na oge a dị ka ala mmepụta / elu ego / machining ájá nkọwapụta ike adabaghị na mba ọkọlọtọ, wdg anyị factory, mgbe yiri ngalaba nwalee, anyị na ngwaahịa nwere ike kpamkpam na-eji maka C55 n'elu ihe Ndinam ọkọlọtọ.
The akụkọ ihe mere eme nke anyị factory ike deere ka afọ 2000, anyị malitere site na echichi nkume factory, mepụtara ka OEM nkume factory na nyekwara aka na nkume factory, wdg N'oge ihe karịrị 10 afọ mmepe, anyị wuru a nnukwu ego nke installers , n'ichepụta ọrụ na ahụmahụ blasters, ndị nwere ike ekwe nkwa Dongmeng Machinery ezitekwara ahịa anyị na n'elu ọrụ. Dongmeng Machinery nwere ike inye free technical mkpara ahịa anyị si ngwá wụnye ka mmepụta usoro.
Dongmeng Machinery nwere zuru okè quality management usoro, anakọtara ndị ọzọ merela agadi technology na innovate ya ahịa anyị na-enye ha na n'elu ngwaahịa. Anyị na-enye zuru ezu ozi ahịa na-agụnye emebe, na-ere, na ngwá debugging na mmezi. Iji n'elu mkpara, guzosie ike n'elu ụlọ ọrụ, na-eke n'elu ika, na-enye n'elu ọrụ, anyị na-eme ihe kasị mma anyị na-eme ka anyị ụlọ ọrụ na-n'elu otu na China. Dongmeng Machinery mgbe niile na-eme na uche nke "eziokwu, elu àgwà & nkwupụta ụda; mbụ na klas "mgbe anyị na-ere anyị ngwá ma ọ bụ na-ewetara anyị na-ejere. Site na nke a ụzọ anyị nwere ike izute na-esiwanye ọgwa na ahịa chọrọ na-eke ihe bara uru n'ihi na ọrụ.